सत्तासँग जोडिएका हनुमान र धुपौरेहरुको कथा
२०७७ असोज १० शनिबार, भगवान रामका गुण तथा बैगुण दुवै थिए । देवत्व देख्नेहरुले उनको राम्रो पक्षमात्र उजागर गरे । विजयपछि बाँदरहरुको कुप्रशासनलाई कही पनि व्याख्या गरिएन । उनको विजयमा हनुमान र उनको रामप्रतिको भक्ति नै मुख्य अस्त्र रह्यो । ... बाँकी अंश»
२०७७ असोज १० शनिबार, फेरी बजारमा हल्ला चलेको छ केपी ओलीका मन्त्रीहरुले काम गर्न सकेनन, उनीहरु असफल भए । अघिल्लो पटक पनि यस्तै हल्ला गरिएसँगै लालबाबु, गोकर्ण लगाएतलाई पनि नै हटाईएको थियो । असफल मन्त्रीहरु हटे अब पक्कै सरकार सफल भएको घोषणा हुनेछ यहि पर्खाइमा थिए नेपाली जनताहरु । तर त्यस्तो हुन सक्ने कुरै थिएन । लालबाबु र गोकर्णहरु असफल हुने र बिना, ईश्वरहरु सफल कसरी हुन्थे र ? ... बाँकी अंश»
शनिबार दुईपटक कालबेला, यस्तो हुनेछ समग्रमा दिन
२०७७ असोज १० शनिबार, यो मलमासमा श्रीमान श्रीमती संगै बस्न नहुने र संगै बसेर कुनै जाय जन्म अर्थात सन्तान जन्मिएमा उक्त सन्तान रोगी हुने र आयु पनि छोटो हुने समुद्रशास्त्रमा उल्लेख छ । ... बाँकी अंश»
मेशिनको प्रयोग गरेर आध्यात्मिक अनुसन्धान
२०७७ असोज ९ शुक्रबार, सात मुख्य चक्रहरु अर्थात ऊर्जा केन्द्र जसको अलग-अलग अनि सम्बन्धित गुणहरू छन् । माथिल्लो चार चक्रहरू हृदय क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ । हृदय चक्र (अनाहत-चक्र): यो चाहना गुणसँग सम्बन्धित छ । अर्को गला चक्र (विशुद्ध-चक्र): यो सांसारिक र आध्यात्मिक भावनाहरुको गुणसँग सम्बन्धित छ । मध्य-आँखीभौं चक्र (आज्ञा-चक्र): यो एकाग्रताको गुणसँग सम्बन्धित छ । सहसरार-चक्र: यो ईश्वरिय सिद्धान्तको अनुभव प्राप्त गर्नसँग सम्बन्धित छ । ... बाँकी अंश»
मलमासमा श्रीमान–श्रीमतीको सम्पर्कले बच्चा जन्मिए के हुन्छ ?
२०७७ असोज ९ शुक्रबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनशुक्लको नवमी तिथि रहनेछ । आज पूर्वषाढा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा शोभन, करणमा बालब, आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध्र रहनेछ । ... बाँकी अंश»
के गर्नाले मनुष्यको कल्याण हुन्छ ?
२०७७ असोज ८ बिहिबार, काठमाडौं । भिष्मपितामह र युधिष्ठिरका वीचमा धर्म, अधर्म लगायतका विभिन्न विषयमा चर्चा चल्दै थियो । युधिष्ठिरले गरेका प्रश्नका उत्तर पितामहले दिदै थिए । एकपटक युधिष्ठिरले के गर्नाले मनुष्यको कल्याण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
कोरोना कहर, रेडियोकर्म र मेरो अनुभव
२०७७ असोज ८ बिहिबार, बिश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरस संक्रमणले हाम्रो देश नेपाललाई पनि अछुतो भने राखेन । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ देखि देशलाई नै लकडाउनमा राख्यो । कोरोना भाईरस नेपालमा प्रवेश भएसँगै हरेक जनमा त्राससँगै एउटा न एउटा कथा बनेको छ, कथा बन्दैछ । ... बाँकी अंश»
मलमासमा पति पत्नीसँगै बस्न हुँदैन, यस्तो छ कारण
२०७७ असोज ८ बिहिबार, आज मूल नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा आयुष्मान, करणमा भद्रा, आनन्दादि योगमा धूम्र रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा धनु राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३० घटि ६ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
जनताबाट तिरस्कृत सरकारबाट पुरस्कृत, जनताबाट पुरस्कृत भने सरकारबाट तिरस्कृत
२०७७ असोज ७ बुधबार, संविधान जारी भएको पनि ५ वर्ष पुगेर ६ वर्ष लाग्यो । नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्यसंगै लेखन प्रारम्भ भएको संविधान झण्डै १० वर्ष पछि २०७२ साल असोज ३ मा जारी भएको थियो । जनतालाई मालिक बनाउन भनेर स्थापना गरिएको गणतन्त्रमा जनता मालिक भए कि भएनन् जग जाहेर छ । ... बाँकी अंश»
चाणक्यका अनुसार यस्ती श्रीमती घरमा भए जंगल जादै राम्रो
२०७७ असोज ७ बुधबार, काठमाडौं । पुरानो समयमा भारत विभिन्न वर्गमा विभाजित थियो। त्यस बेला आचार्य चाणक्यले सम्पूर्ण भारतलाई एकजुट गरेर चन्द्रगुप्तलाई अखण्ड भारतको सम्राट बनाए। चाणक्यले नीति पुस्तक पनि रचना गरेका छन् । जसको नाम चाणक्य नीति हो। यस नीतिमा उल्लिखित नीतिहरू अनुसरण गरेर हामी धेरै समस्याहरूबाट जोगिन र सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। ... बाँकी अंश»
चन्द्रमा तुला राशिमा, पश्चिम बाहेक अन्य दिशाको यात्रा अशुभ
२०७७ असोज ७ बुधबार, आज ज्येष्ठा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा प्रीति, करणमा गर, आनन्दादि योगमा ध्वांक्ष रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३० घटि ११ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
दाउरा बेचेर पेट पाल्ने अनाथ बालक यसरी बने महान् दार्शनिक पाईथागोरस
२०७७ असोज ६ मंगलबार, यूनान देशको थ्रेस प्रान्तको अब्डेरा नगरमा एक अनाथ बालकले दाउरा काटेर बजारमा लैजान्थे । अनि बेचेर आफ्नो पेट पाल्ने गर्थे । उनको सम्पुर्ण दिन त्यहि काममा बत्थ्यो । एक दिन एक सज्जन व्यक्तिले देखे, एक सानो बालकले आफ्नो अगाडि दाउराको सानो भारी राखेर बेच्ने प्रयास गरिरहेको । एउटा कुराले ती व्यक्तिलाई छक्क पार्‍यो । दाउराको भारी अरुको भन्दा एकदमै राम्रो मिलाएर कलापूर्ण दंगले बाँधिएको थियो । ... बाँकी अंश»
मुख्यसचिव रेग्मीलाई राजदूतको लोभ, विधि मिचेर बैरागीलाई मुख्यसचिव दिने तयारी
२०७७ असोज ६ मंगलबार, सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव हुने प्रावधान मिच्दै आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउने तयारी गरेको छ । ... बाँकी अंश»
मलमास बार्नुभयो ? मंगलबार पश्चिम बाहेक अन्य दिशाको छैन यात्रा शुभ
२०७७ असोज ६ मंगलबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनशुक्लको षष्ठी तिथि रहनेछ । आज अनुराधा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा विष्कुम्भ, करणमा कौलव, आनन्दादि योगमा वज्र रहनेछ । ... बाँकी अंश»
जब जुध्दै आएका दुई साँढेले भिखारी जनकको खिचडी माटोमा मिलाए
२०७७ असोज ५ सोमबार, काठमाडौं। राजा जनकले एक रात भिखारी बनेको सपना देखे । टाढा टाढा गएर भिक्षा मागिरहँदा उनी असाध्यै भोक लागेर तड्पिरहेका थिए। धेरै याचना पछि मुस्किले उनले दाल र चामल पाए र निकै संघर्ष गरेर उनले खिचडी पकाएका थिए। ... बाँकी अंश»
झण्डा ओडाउने भूमिकामा सीमित नहोस् कांग्रेस नेतृत्व
२०७७ असोज ५ सोमबार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका बलियो हुन नसक्दा सत्ताधारी दललाई आफुखुशी काम गर्ने मैदान खाली हुन गएको छ । कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारसँग वैचारिक प्रतिवाद गर्न कतिपय ठाउँमा आफ्नै हिजोको निर्णयले छेकेको छ । अमूक संवैधानिक पदको लागि गरिएको भागबण्डा ‘तगारो’ बनिदिएको छ । ... बाँकी अंश»
संबिधान निर्माणका पाँच बर्ष र नेकपा सरकार
२०७७ असोज ५ सोमबार, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण भएको ५ बर्ष बितिसकेको छ । संबिधानका प्रावधानमा केहि राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक ब्यक्तित्वहरूको असहमति भए पनि समग्रमा ९२ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्वले स्वीकारिएको यो संबिधानलाई ब्यवहारत लागु गर्नुपर्ने चुनौती भने अहिले पनि उत्तिकै छ । ... बाँकी अंश»
सोमबार दुई पटक अमृतबेला, यस्तो हुनेछ दिन
२०७७ असोज ५ सोमबार, आज विशाखा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा वैधृति, करणमा बब, आनन्दादि योगमा मित्र रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा तुला राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३० घटि १९ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
श्रीकृष्णले द्वारिका नगरी बसाउनु पछाडिको कारण
२०७७ असोज ४ आइतबार, काठमाडौं । एक पटक भगवान श्री कृष्णले रुक्मिणीसँग भन्नुभयो, 'रुक्मिणी तिमि त निकै रुपवती छौ र म त भगौडा हुँ। राजाहरुले हामीलाई बस्न दिएनन् तब हामी गएर आफ्नो द्वारिका बसायौं।' ... बाँकी अंश»
२०७७ असोज ४ आइतबार, शनिबार राजधानीको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित देशका अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको भब्य जमघटमा पाँचौं संविधान दिवस मनाई रहँदा त्यहि टुँडिखेलको एउटा कुनामा कोरोनाका कारण रोजगार गुमेका श्रमिकहरु एकछाक खानका लागि तड्पिरहेका थिए l ... बाँकी अंश»